ဖောက်ပြန်ချင်တိုင်းဖောက်ပြန်နေပြီးမှ လမ်းမခွဲဖို့ ဒူးထောက်ကာငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေသည့်ချစ်သူကို ခေါင်းလေးအသာပုတ်ပြီး ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်၍ထွက်သွားခဲ့သည့်ကောင်လေး..See more. .. – Messi Club
ဖောက်ပြန်ချင်တိုင်းဖောက်ပြန်နေပြီးမှ လမ်းမခွဲဖို့ ဒူးထောက်ကာငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေသည့်ချစ်သူကို ခေါင်းလေးအသာပုတ်ပြီး ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်၍ထွက်သွားခဲ့သည့်ကောင်လေး..See more. ..
ချစ်သူစုံတွဲနှစ်ဦးကြားတွင် တစ်ဦးကဖောက်ပြန်နေခဲ့ပြီဆိုလျှင် ကျန်တစ်ဦးကဒေါသထွက်ကာအမုန်းကြီးမုန်းပြီးနာကျည်းနေ ကြတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း တရုတ်နိုင်ငံမှ လူငယ်လေးတစ်ဦး၏ေ သွးအေးစွာဖြင်ပြညာသားပါပါ တုန့်ပြန်ပုံတွေဟာ အတုယူဖွယ်ရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်။လူအများ၏ပြောဆိုပုံအရ ကောင်လေး၏ချစ်သူကောင်မလေးဟာရည်းစားများစွာဖြင့်ပွေရှုပ်နေကြောင်းကိုသရှိသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအခါမှကောင်မလေးဟာကောင်လေးနှင့်လမ်းမခွဲချင်သည့်အတွက် လမ်းဘေး၌ပင်ဒူးထောက်ကာငိုယိုပြီး လမ်းမခွဲဘဲခွင့်လွတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါလူငယ်လေးကတော့ စကားတစ်ခွန်းပင်ပြန်မပြောခဲ့ဘဲ ချစ်သူကောင်မလေး၏ဦးခေါင်းကိုသာအသာအယာလေးပုတ်ပြပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
ကွယ်ရာမှာဖောက်ပြန်ချင်တိုင်းဖောက်ပြန်နေပြီးမှ လမ်းမခွဲဖို့ ဒူးထောက်ကာငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေသည့်ချစ်သူကို ခေါင်းလေးအသာပုတ်ပြီး ပညာသားပါပါတုန့်ပြန်၍ထွက်သွားခဲ့သည့်ကောင်လေး
လူအမှား၏ပှောဆိုပုံအရ ကောငလွေး၏ခစှသွူကောငမွလေးဟာရညွးစားမှားစှာဖှငွ့ပှရှေုပနွကှေောငွးကိုသရှိသှားခဲ့တာဖှဈပါတယွ။ထိုအခါမှကောငမွလေးဟာကောငလွေးနှငွ့လမွးမခှဲခငှသွညွ့အတှကွ လမွးဘေး၌ပငဒွူးထောကကွာငိုယိုပှီး လမွးမခှဲဘဲခှငွ့လှတပွေးဖို့တောငွးဆွိုခဲ့ပါတယွ။
ထိုအခါလူငယ်လေးကတော့ စကားတစ်ခွန်းပင်ပြန်မပြောခဲ့ဘဲ ချစ်သူကောင်မလေး၏ဦးခေါင်းကို သာအသာအယာလေးပုတ်ပြပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။
C rd. C red i t